မနိုင်ဝန်လား နိုင်ဝန်လားလို့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မနိုင်ဝန်လား နိုင်ဝန်လားလို့။
Posted by ခင်ခ on Sep 27, 2012 in My Dear Diary | 36 comments
ကျွန်တော်ဖေ့ဘုတ်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့ တွေးမိတာလေး ကိုရေးချမလို့ပါ။
သူတို့အရွယ် ကလေးတွေ မနက်ဆို အဖြူ နဲ့ အစိမ်း ၀တ်ပြီး၊ အဖေဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေကဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဦးလေး၊ အဒေါ်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် သို့မဟုတ် တနည်းနည်းနဲ့ ကျောင်းသွားနေကြပြီး စာသင်နေကြတယ်၊ ဒါ့အပြင် ဘ၀မပြည့်စုံတဲ့ တစ်ချို့ကလေး တွေကျတော့ မိဘမရှိ၊ ခိုကိုးရာ မရှိလို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ သီလရှင်ကျောင်းတွေ၊ ဘာသာအသီးသီးရဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး နေရာတွေမှာ ခိုလှုံခွင့်ရပြီး စာသင်နေကြသေးတယ်၊ သူတို့တွေကျတော့ ခုနမိဘမဲ့ စာသင် ရာနေရာတွေထက် ဆိုးတယ်လို့ပြောရမလား၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲ မတွေးတတ်အောင်ဘဲလေ။
ကျောင်းသွားပို့တဲ့ကလေးကို မနက်စာကို လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ သူ့မိဘက ၀င်ပြီးကျွေးတော့ အဲဒီကလေး စားဖို့အတွက် မှာထားတဲ့ စားစရာကိုသယ်ယူလာတဲ့ စားပွဲထိုးလေးက ရွယ်တူဖြစ်နေတာကို စာဖတ်သူတို့ သတိထားမိမလား မသိ ဘူးလေ။ ဒါဟာဆင်းရဲတဲ့မိသားစုမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့အတွက် ကျောင်းစာဆိုတာဘေးဖယ်လို့ မိမိ မိသားစု အဓိက စားဖို့အရေးကို လုပ်နေကြရတာနော်၊ အဲဒီလိုမျိုး ကျောင်းနေအရွယ်မှာ စာမသင်နိုင်ဘဲ ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ ကလေးတွေဝန်းကျင်မှာ သတိ ထားကြည့်မိရင် အများကြီးတွေ့နေရသေးတယ်နော်၊ အရွယ်ရောက် သူတိုင်း ကျောင်း ထားနိုင်ရမည် အခမဲ့ပညာရေး စနစ်ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်ပြားမှမပေးနဲ့ အလားကားလာတက်ပါ ဆိုတာတောင် စာသင်နေဖို့အချိန်ကိုမပေးနိုင်လို့ မိသားစုတ၀မ်းတခါးအတွက် ရုန်းနေကြတာမို့ သူရွယ်နဲ့ သူလုပ်နေတာ မနိုင်ဝန်လား နိုင်ဝန်လားလို့။
ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲမှုပပျောက်ရေး စီမံကိန်းကြီး ဘယ်နားရောက်ပြီလဲ ဘယ်တော့ဆုံးမှာလဲလို့ တွေးရင်းနဲ့ဘဲ မိုးတွေချုပ် ညဉ့်တွေနက်လို့ အိပ်ရပါပေါ့လေ။
…ကြည့်ရတာ ကလေးလေးက ဒီအလုပ်မှာ အသားကျနေပုံပဲ..လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ
မသိဘူး..နေလောင်ထားတဲ့အသားနဲ့..သူ့အရွယ်လေးနဲ့ မဖြစ်မနေ အုတ်သယ်
ရမယ်ဆိုရင်တောင် ၂လုံး၊၃လုံး များပြီပေါ့..၀မ်းရေးအတွက် မနိုင့်တနိုင့်ဝန်
ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ နှင်းနှင်းရေ။
အုတ်သယ်တာကို အပြင်မှာလည်းတွေ့ဖူးတယ်၊ အခုလို အင်္ကျီကျွတ်တွေနဲ့ဘဲလေ၊
နေပူထဲမှာ ပူမှန်းမသိ လုပ်နေကြရတာပေါ့။
ဆင်းရဲတယ်ဆိုပမယ့်ဗျာ … ဒီလိုအရွယ်လေးကို ဒီလိုအလုပ်မျိုးခိုင်းရက်တဲ့လူကတော့
မိဘ.. အုပ်ထိန်းသူတွေမှာ.. အဓိကတာဝန်ရှိတာပါ..
ခိုင်းရက်တဲ့သူကို.. ဖမ်းပြီး.. ထောင်ထဲထည့်သင့်တယ်..
လက်တွေ့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့.. အဖြေကတော်တော်ဝေးနေသေးကြောင်း… :buu:
ဒီပုံ မြန်မာပြည်က လားဆိုတာတော့ သံသယ ၀င်မိပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို အုတ်မျိုး မဖုတ်ဘူးလားလို့ ။ ဒါကတော့ ထားတော့ ။ ဒီလိုအလားတူ တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် ။
ကိုယ်က အလုပ်ရှင်ဆိုပါတော့ ..
ထိုက်သင့်တဲ့ လုပ်အားခ ပေးပြီး ကလေး မို့လို့ မငှား ဘူး ။ မခိုင်းဘူး ဆိုတာ မှားသလား မှန် သလား ဆိုတာ ဝေခွဲလို့ မရဘူး ။
ကိုယ်မငှါးရင် သူတို့ စားဝတ်နေရေးမတတ်နိုင်ဘူး ။ မိဘရဲ့ ငြိုငြင်တာ ခံရတယ် ။ အရိုက်ခံရတယ် ။ ပိုဆိုးတာ လုပ်ရတယ် ။
ကိုယ်ခိုင်းရင် သူတို့ ထမင်း နပ်မှန်အောင် စားရတယ် ။ အချို့ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့တွေ့ရင် အထိုက်အလျောက် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်မှု့ရတယ် ။
ကိုယ် ကျတော့ သူများ အမြင်မှာ ရက်စက်ရာ ကျတယ် ။ ဘယ်ဟာ ဦးစားပေးရမလဲ ။
ပြောဖို့ကျန် သွားလို့ ..ဒီလို မနိုင်ဝန်ကို ခိုင်းတာ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်.
ပုံကတော့ ဘယ်မှာရိုက်တာလဲ ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ ဖေ့ဘုတ်ထဲဝင်လာလို့ အဲဒီပုံကြည့်ပြီး
ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ခဲ့ရတာတွေ စုပြီးတွေးမိတာကို တင်ချင်တာပါ အဓိကက။
ဆင်းရဲမှုဘ၀ဒါဏ်တွေ ခါးသီးစွာခံစားရတဲ့ ကလေးအရွယ်တွေ သူများပညာသင်ချိန်မှာ မသင်ကြားနိုင်တော့ သူတို့ရှေ့ဆက်ရပ်တည်တဲ့ ဘ၀တွေမလှပနိုင်တာကို သနားမိခြင်းပါဗျာ။
အဲဒီမှာ အလုပ်ခိုင်းသူလည်း အပြစ်မဟုတ်ပါ၊ ကထူးဆန်းပြောသလို သူတို့မခိုင်းရင် ဘယ်လိုစားသောက် ရပ်တည်သွားမလဲလေ။
နိုင်ဝန်၊မနိုင်ဝန်ထက် ဒီလိုဘာကြောင့် စီပွါးရှာရသလဲဆိုတာပဲပြောချင်တယ်။
အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဆိုတာ အခမဲ့ပြောလို့ ရလို အခမဲ့ပညာရေးလို့ပြောနေကြတာ၊
ဆရာမတွေကပိုလို့ တောင်အနိုင်ကျင့်နေတာ တစ်ပုံကြီး။
ကျောင်းသားတွေကို စာအုပ်တွေ အခမဲ့ဝေတယ်လို့ ပြောတယ်။
ဘယ်လောက်ပျော်သလဲဆိုတာ ငယ်ရာကကြီးလာတဲ့ သူတိုင်းခံစားဘူးကြပါတယ်။
အခမဲ့ဝေတဲ့စာအုပ်တွေ အခနဲ့ရောင်းစားပြီး ဖတ်စာအုပ်အဟောင်းတွေကို
စာအုပ်အဟောင်းက မရေးရသေးတာတွေဖြဲပြီး ပြန်ချုပ်ပြီး ကလေးတွေကို ဝေပေးတာ။
အတန်းသစ်တက်ပြီး စာအုပ်အစုတ်ကိုင်ရတဲ့ ကလေးတွေမှာ
The best ကွန်မန့်လေးဖတ်ပြီး ရင်မောမိပါရဲ့။
ဒီလိုအရွယ်တွေကိုတွေ့ချင်ရင် အနီးစပ်ဆုံးကျွန်တော်ပိုစ့်စာသားထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။ လဘက်ရည်ဆိုင်ကြီးကြီးတစ်ခုမှာသော်လည်းကောင်း တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခု ပြောပြပါရစေ။ ကျောင်းတစ်ခုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ လဘက်ရည်ဆိုင် တစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒီလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ကျွန်တော်က မျက်နှာချင်းဆိုင် ကကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့ချိန်းထားလို့ ထိုင်စောင့်နေ တုန်း ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်း ထိုးပြီးခဏအကြာ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာ ကလေးတွေက လက်လေးပိုက် မတ်တပ်ရပ်လို့ ဆရာမကို မင်္ဂလာပါဆရာမလို့ နုတ်ဆက်နေတဲ့အသံက လဘက်ရည်ဆိုင်ထိကြားရတယ် မြင်လည်းမြင်နေ ရတယ်၊ အဲဒီမှာ လဘက်ရည်ဆိုင်က ကလေးတစ်ယောက်က ဆိုင်ဝကစားပွဲလေးကို လက်လေးထောက်ပြီး သေချာကြည့်နေတာတွေ့လိုက် ရတယ်၊ သူဘာလို့ကြည့်နေတာလဲ သူစိတ်ထဲဘယ်လိုရှိလည်း ကျွန်တော်မသိပေမယ် ကျွန်တော် စိတ်ထဲတော့ အဲဒီကလေးကို သနားသလိုဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ဘဲဗျာ။ ကလေးအရွယ်က ရှိလှ ၈နှစ် ၉ နှစ်လောက်ပေါ့။
ကျွန်တော် မြိတ်ကျွန်းစုက ပုလဲကျွန်းမှာနေခဲ့စဉ်က
သူကကျွန်တော့်ကိုပြောပြလို့ သူ့ကျောင်းကို လိုက်ကြည့်တော့
ကလေးတွေက တစ်မနက်လုံးကျောင်းမှာ စာကောင်းကောင်းသင်ကြတယ်။
နေ့လည် ၁ နာရီကျော်ရင် အငြိမ်မနေနိုင်ကြတော့ဘူး
သူတို့မှာလည်း အဲဒီလိုကျောင်းကမထွက်လာရင်မိဘတွေက မကြိုက်ကြဘူး။
အဲဒီပုလဲကျွန်းမှာ လလယ်ပိုင်းဆိုရင် ပိုက်ဆံရှိတောင် ၀ယ်စားစရာမရှိအောင်
ကုန်ပစည်းရှားတယ်။ လှေကြုံမရှိဘူးလေ။ လှေက လကုန်/လဆန်းလစာထုတ်လှေပဲရှိတာ။
ပညာရေးထက် ၀မ်းရေးကခက်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။
P chogyi ရဲ့ ကွန်မန့်ကိုဖတ်ပြီး
ပညာရေး နဲ့ ၀မ်းရေး ရေးနှစ်ရေးမှာ ဗျာများနေရရှာတယ်လို့
ကောင်းတဲ့ ဘက်ကကြည့် ရင် ဒီအရွယ်မျိုးတွေ တောင်းစားနေတာ
အလစ်သုတ်နေတာမျိုးတွေရှိတော့ဒီလို ရရာအလုပ် လုပ်နေတာက
အလုပ်ဟူသမျှဂုဏ်ရှိစွ ဆိုသလိုပေါ့ လေ
မကောင်းတာကတော့သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာကြည့် ရင် အလွန်စိတ်မကောင်းစရာပါ
မနိုင်ဝန်မထမ်းးပဲ နိုင်သလောက် မိဘကိုကူညီတာ နိုင်ငံတော်အတွက်
လုပ်တာကတော့ဒီလိုချွတ်ခြုံ ကျနေတဲ့  အချိန်မှာ တစ်တပ်တအားပါဝင်နိုင်ခဲ့ ရင်
ကောင်းမယ်ထင်တာပဲ ။ ကျနော့် အထင် ဒီနိုင်ငံက လူတစ်ဝက်လောက်က
အလုပ်ကို ကြောက်ကြမယ်ထင်တယ်။လူတွေရရာ လုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့ 
ဘာမှ မယ်မယ်ရမလုပ်တဲ့ သူတွေကအများသား ။
ကျနော်ကတော့လက်တွေ့ပေါ်မှာဘဲအခြေခံပြီး ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် လုပ်သင့်မလုပ်သင့်စဉ်းစားတယ်ဗျာ.
လက်တွေ့ပေါ်စဉ်းစားတဲ့ ကိုပေါက် နဲ့ အတွေးပေါ် ရေးသားတဲ့ ကျွန်တော် ပေါ့ဗျာ။
ပိုစ့်ရည်ရွယ်ချက် – ကျောင်းနေသင့်တဲ့အရွယ်ကလေးတွေ ပညာမသင်ရရှာဘဲ ဘ၀အတွက် အလုပ်လုပ် နေရတာကို သနားမိပြီး ကလေးအရွယ်ဆိုပေမယ့် ဘ၀စားဝတ်နေရေးအတွက် မနိုင်ဝန်ထမ်း၍ လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းသာ။
စိတ်က ဆန်းဆစ်တစ်ဗ်ဖြစ်လွန်းလို့ ….. အခုလိုပုံမျိုးမြင်ရလျှင် စိတ်မကောင်းဘူး ။ ကိုယ်တွေလည်း ကလေးဘ၀ကနေ ကြီးခဲ့တာပဲမို့ … လူတန်းစေ့ကျောင်းတက်ခဲ့ရပြီး ၊ မိဘပိုက်ဆံ ထိုင်ဖြုန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀နဲ့ ယှဉ်ပြီးကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ။ သူတို့လေးတွေကျတော့ အရွယ်နဲ့ မမျှအောင် ၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ဘ၀ကို ရုန်းကန်ရရှာတယ် ။ ကိုယ့်ဝမ်းစာ ရှာရုံတင်မက ၊ အရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မိသားစုအတွက်ပါ ပိုက်ဆံ ရှာရတယ် ။ အခြေနေကြောင့်သာ အနေနိမ့်ကျပေမယ့် သူတို့စိတ်လေးတွေ ၊ ကိုယ်တွေထက် အများကြီးသာပါတယ် ။
အများနည်းတူ စာတော့ သင်ချင်ကြမှာပါ ၊ ဒါပေမယ့် စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်ရချိန် ၊ စာတတ်ဖို့ထက် ထမင်းနပ်မှန်ဖို့ ပိုအရေးကြီးတာကြောင့် ၊ အခုလို အသက်မပြည့်ပဲ အလုပ်ခွင်ထဲ ရောက်ကြရရှာတယ် … ။တစ်ချို့ဆို ၊ ကိုယ်တိုင်အတွက်တောင်မဟုတ်ပဲ … မိသားစုအတွက်ပါ ရုန်းရတယ် .. အဲ့လို ကလေးကျတော့ စာသင်ဖို့စရိတ်ငြိမ်းဆိုတာတောင် စာမသင်နိုင်ရှာပါဘူး ။
အခုနောက်ပိုင်း ဘကကျောင်းတွေ ပေါ်လာပြီးနောက် … နေစရိတ် .. စားစရိတ်ငြိမ်းစာသင်လို့ ရမယ့်နေရာလေးတွေ ဟိုတစု ဒီတစုဖြစ်လာတယ် …. ။၀မ်းသာစရာပါ .. ဒါပေမယ့်… ကိုယ့်ဝမ်းစာ ရှာစားနေရလို့ကျောင်းမတတ်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်ပေမယ့် .. နောက်ကွယ်က မှီခိုနေတဲ့ မိသားစုရှိလျှင် … သူ့မှာ စာသင်ဖို့ မဖြစ် နိုင်ပါဘူး …။ မပြည့်မစုံပါလျှက် မွေးခဲ့တာ .. ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ရမှန်း မသိလို့ ..မမြင်ရတဲ့ အတိတ်ကံကိုပဲ ..တရားခံလုပ်မိပါတော့တယ် ။
အန်ကယ်ရေ …. ဒီနှစ်2လပိုင်းက သမီးချောင်းသာ သွားတော့ … ကဏန်းရောင်းတဲ့ကလေးတွေ … စကားတောင် မပီသေးဘူးပဲ … ။ … တချို့ဆို သုံး နှစ် ၊ တချို့ ဆို ငါး နှစ် …မနက်သူများတွေ အိပ်ကောင်းတုန်း ..ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့ . ရေပုံးလေးတွေ ဆွဲပြီး …သောင်ပြင်မှာ ကဏန်းလွှတ်မယ့်လူ လိုက်ရှာနေတာ ။ မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး … ။ တူလေးအရွယ်တွေမို့ … သူတို့သာ ဆန္ဒရှိလျှင် ၊ နှစ်ယောက် သုံးယောက်လောက်ကို သမီးလခထဲက အဲ့ဒီမှာပဲ ကျောင်းထားပေးမယ် တွေးခဲ့ပေမယ့် … ကျောင်းတက်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ … အမေက ရောဂါသည် … အပြင်ထွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပဲ … ။ ရင်ထဲတောင် နည်းနည်း နာကျင်သွားတယ် … ရောဂါသည်မို့ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပေမယ့် …. ကလေးတော့ မွေးတတ်တယ်လားဆိုပြီး … မဆီမဆိုင်ကလေး အမေကို ဒေါကွီးမိသွားတယ် … ။ လက်ကမ်းပေးတာတောင် ဆွဲမတတ်နိုင်တဲ့ ဘ၀တွေအများကြီးပဲ အန်ကယ်ရယ် ..စိတ်မကောင်းပေမယ့် … ဘာမှ လုပ်ပေးလို့လည်း မရ
နောက်ပြီး ကမ္ဘာအေး ဘုရားမှာ .. ငါးစာရောင်းတဲ့ ကလေးတွေ …. အဲ့ဒါလေးတွေက တောက ခေါ်ထားတာလေးတွေ …. အရင်က ရန်ကုန်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးတဲ့ … ။သူတို့ဆို တလမှ စားစရိတ်ငြိမ်း၊ နေစရိတ်ငြိမ်း ၊ လုပ်ခ ရှစ်ထောင်ပဲ ရတယ်တဲ့ … ။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အင်တာဗျူးဖူးတယ် … သားလေးကျောင်းမတတ်ဘူးလားလို့ မေးတော့ …. ၊ ကျောင်းတက်တော့ ပိုက်ဆံမှ မရတာ ၊ အလုပ်လုပ်မှပိုက်ဆံရတာလေ မမရဲ့တဲ့… ။ ဘာပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး … မျက်ရည်ဝဲမိတယ် … ။ ပြန်ရှင်းပြဖို့တောင် စိတ်မကောင်းလို့ … လစ်လျူရှုခဲ့ရတယ် …
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ..အစိုးရနဲ့ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက … သေချာကိုင်တွယ်လျှင် ဒီပြသနာတွေ အထိုက်လျှောက်တော့ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ .. အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကို အလုပ်ခွင်တွင်းခိုင်းစေမှုတွေ ၊ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတုန်းပဲ … ။ ဒါ့ပြင်ကလေးကို မှီခိုပြီးစားသောက်နေတဲ့ မိဘတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပဲ … ။ အဲ့လို လူတွေအတွက်ကျတော့ … ပညာပေးဖို့ လိုလာပြီ ။ အထူးသဖြင့် ၀င်ငွေမရှိပဲ …ကလေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်မမွေးဖို့ .. သားဆက်ခြားဗဟုသုတပေးသင့်နေပြီ ။ :gee:
တာဝန်မယူနိုင်လျှင် မမွေးကြပါနဲ့လို့ပဲ ….. ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် … :chee:
မအိတုံရေ သေချာပြည့်စုံစွာ ရေးပေးတဲ့ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုလိုက် တောင်းစားနေတဲ့ကလေးတွေထက်စာရင် ခုလို လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ ကလေးမျိုးတွေကိုတော့ ချီးကျူးမိတယ်။ ဘ၀ပေးတွေကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ခံစားရတယ်နော်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေအများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ တချို့ကလေးတွေကျတော့ ကျောင်းတက်ချိန်မဟုတ်ပဲ ပြင်ပအချိန်မှာ အလုပ်လုပ်တာတွေလည်း မြင်ဖူးတယ်။ တစ်ခါတလေကျောင်းစိမ်းတောင်မချွတ်ကြတာ တွေ့ရှိရတယ်။
မှန်ပါတယ်မနှောရေ၊ လုပ်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ ကလေးတွေကို ချီးကျူးသင့်ပါတယ်၊
ကျွန်တော် တစ်ခါတရံ ထီထိုးတတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆိုင်တွေမှာတော့ မဟုတ်ဘူး လဘက်ရည်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ဘီယာဆိုင်ထိုင်တဲ့အခါ ကလေးတွေလာရောင်းတဲ့အခါ အားပေးလိုက်တယ်၊ ဆိုင်တွေက တဆင့်ပြန်ရောင်းရတာမို့ ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်ဆိုတာသိပေမယ့် သူတို့လေးတွေရဲ့ လုပ်အားကို အသိမှတ်ပြုချင်လို့ပါဗျာ။
တွေ့ရ မြင်ရ သိရတာ တကယ်စိတ်မကောင်းစွာခံစားမိတယ်… ခုလိုတင်ပြတော့လဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဘုရား….ဘုရား…
ပြုသူအသစ်…..ဖြစ်သူအဟောင်း တဲ့ …
ကလေးရေ ….. ကလေးရဲ့ ဘ၀မှာ ၀ဋ် ဆိုတာများရှိခဲ့လျှင် ….
၁. Green Rose သာမိဘဆိုရင်.. ဒီအရွယ်ခလေးကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းမလား၊
ဟင့်အင်း. မခိုင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေဆိုတာကတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကို ကိုယ့်သားသမီးတွေက ကူညီကြတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေကြတာမျိုးပါ။ သူများအလုပ်ကို ငွေရဖို့ခိုင်းတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့.. အိမ်အလုပ်တွေဘာတွေလေ…Green Rose ဆိုလည်း ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အမေ့ကို ကူပြီး တောက်တိုမယ်ရတွေ လုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ.. ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ကိုယ်.. တစ်ခါတစ်လေ အမေခိုင်းလို့ပေါ့
၂။ Green Rose သာ အလုပ်ရှင်ဆိုရင်.. ဒီအရွယ်ခလေးလေးကို အလုပ်ခန့်မလား?
ဟင့်အင်း .. မခန့်ပါဘူး။
ဘယ်အလုပ်ရှင်မှ အခကြေးငွေပေးပြီး အလုပ်မခန့်ပါဘူး။ ပေးရတာချင်းအတူတူ အလုပ်တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်တွေဆိုရင်သာ ခိုင်းချင်ခိုင်းမှာပါ။ ဒီလောက် ခလေးအလုပ်သမားပြသနာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ပွက်လောရိုက်နေတာ ဒီအရွယ်လေးကို ဘယ်သူမှ မခိုင်းချင်ဘူး။ ခလေးအလုပ်သမားတွေကို ခန့်တယ်၊ ခိုင်းတယ်ဆိုတာက ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေမှာဆိုရင် နည်းနည်း အရွယ်ရနေတဲ့ ၁၃နှစ်၊ ၁၄ နှစ် ၀န်းကျင်လောက်တွေကိုပဲခိုင်းတာများပါတယ်။ နောက်ပြီး.. လဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တော့ ၉ နှစ် ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွေကိုပဲ ခိုင်းကြတာပါ။ (ဒီလောက်ငယ်ငယ်လေးတွေကတော့..အင်း.. ရှိတော့ရှိတယ်.. တချို့နေရာတွေမှာ၊ သမာအာဇီဝ မကျတဲ့နေရာတွေမှာ.)
၃။ Green Rose သာ ခလေးလေးဆိုရင် ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မလား။
ဟင့်အင်း Green Rose အဲဒီ့အရွယ်တုန်းက ဘယ်အလုပ်ရှင်ဆီကိုမှ အလုပ်သွားမလျှောက်ဖူးပါဘူး။
အလုပ်ရှာလုပ်ဖို့၊ ငွေရှာဖို့.. ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဖြစ်နိုင်တာက ဒီဓါတ်ပုံထဲက ခလေးလေးဟာ အဲဒီ့အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်သမား တစ်ယောက်ယောက် ရဲ့ ခလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သူတို့အိမ်မှာ အိမ်ဆောက်နေတာ၊ ပြင်နေတာ၊ တစ်ခုခု လုပ်နေတာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ သူ့ မိဘ၊ အကို၊ အမ တွေ တခြားသူတွေ အလုပ် လုပ်နေတာမြင်ပြီး သူလည်း ၀င်လုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိဘတွေကလည်း ငါ့သားလေးက လိမ်မာလိုက်တာ မိဘကို ကူညီတယ်ဆိုပြီး ခဏတဖြုတ် ကြည့်နေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပါ။
အင်း….ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဓိကမိဘတွေအပြစ်လို့ဘဲပြောချင်တယ်။ သားသမီးကိုငွေရှာဖို့သက်သက်အသုးံချနေတာအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်။တောနယ်တွေကများတယ်။
မေးခွန်းတွေ… ဆက်မေးဦးဗျို့ ။
အဲ့ဒီလို ကလေးလေးတွေရယ် ..
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုး လုပ်နေရတဲ့
မြင်မိတိုင်းမှာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်ဗျာ …
တင်ထားတဲ့ပုံကို လေ့လာမေးကြည့်တော့ တကယ်အုတ်ဖုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကပုံပါတဲ့၊ မတ္တရာဘက် အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ရွာမှာ အဲဒီလိုလုပ်နေရကြောင်းပါတဲ့၊ မန်းက သွားရင် တစ်နာရီကျော်လောက်ဘဲသွားရတာမို့ အကယ်၍များမယုံကြရင် မန်းကိုရောက် အောင်လာပြီး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ လိုက်ပို့ပြပေးပါမယ်ဗျာ။
ပုံလေးကြည့်ပြီးတကယ့်ကိုရင်ထဲခံစားရတယ်။ အပေါ်က Green Rose နောက်ဆုံးဖြေတွေးထားသလိုဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်။ အဲဒီလိုအရွယ်မရောက် ကလေးလေးတွေ သူတို့နဲ့ မအပ်စပ်တဲ့အလုပ်လုပ်နေကြရတာ..သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်တာတွေတွေ့ရင် တကယ့်ကို မခံစားနိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်းဘာမှထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ ကျမစလောင်းမှာအဲဒါမျိုးတွေတွေ့ပြီး မကြာခဏမျက်ရည်ကျမိတယ်။
ငွေကြေးတွေ.. စနစ်တကျမစီးဆင်း.. လည်ပတ်လှည့်သွားအောင်မလုပ်တတ်လို့.. ဒီလိုဖြစ်တယ်မှတ်ပါတယ်..။
ငွေတွေဟာ.. ငွေတွေကို စီမံခန့်ခွဲတတ်သူတွေလက်ထဲ.. ရှိသင့်ကြောင်း…
အမှန်အကန်ဘဲ သူကြီးရေ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု စနစ်ကောင်း မတည်ဆောက်နိုင်သရွှေ့တော့
ဆင်းရဲမှုပပျောက်ရေးလည်း တဖြေးဖြေးမျောရှာမပေါ့၊ ဦးကထိန်း ပဲ့ကထောင်၊ ပဲ့ကထိန်း ဦးကထောင်နဲ့ဘဲ
ကြာခဲ့တာလည်းနှစ်မနည်း၊ ဘယ်တော့များ စနစ်ကောင်း ခေတ်ကောင်းရောက်မလဲ
ဒီပို့ စ်ကို ဖတ်ရတော့
သဂျီး ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကွန်မင့်ကို ပြန်သတိရမိတယ်
မိမိ နေထိုင်ရာ မြို့ ရွာအတွက် လုပ်
မိမိ နိုင်ငံအတွက် လုပ်
ဆိုတော့… စူပါမင်းဖြစ်ဖို့ ၊ စူပါအောက်ခြေကနေ တစ်ဆင့်ချင်းတက်ရတာပေါ့
အဆင့် တဆင့်နဲ့ တဆင့်က အကျယ်ကြီးအမြင့်ကြီးမို့ ဒီအတိုင်းခြေလှမ်းမရတဲ့အတွက်
ကုတ်ကက်ဖက်တွယ်တက်ရလို့ မောရပ ဆရာပေရေ။
Shingleခေါ်တဲ့ မြစ်ကျောက် တွေ ကို တောင်းတွေထဲမှာ ထည့်ပြီး လှေဝမ်းထဲ ကနေ ကုန်းပေါ်တင်နေတဲ့ ကလေး အရွယ်ကနေ အသက် ( ၅၀ ) ကျော် ( ၆၀ ) နီးပါး အရွယ်တွေ အထိ အသက်အရွယ် အလိုက် ထမ်းရွက် သယ်ပိုး နေကြတယ် ။ ရေ စို နေတဲ့ မြစ်ကျောက်တွေပေါ့ဗျာ ! နေရာက လှိုင်မြစ် ကမ်း ဘေးမှာ ! ဖိနပ် မပါတဲ့ သူက များသလို သူတို့ အလုပ်လုပ် နေကြတာ နေပူကျဲကျဲ အောက်မှာ ။ လှေကြီးရဲ့ ကိုယ်ထည်မှာ အဲဒီက အလုပ်သမား တစ်ယောက်က မြေဖြူနဲ့ စာရေး ထားတယ် ” ငါတို့မှာ အတောင်ပံ တစ်စုံ ရှိလာမယ် ဆိုရင်တောင် မိသားစု ဆိုတဲ့ နံရံ ကြီးကို ကျော်လွန်ပြီး မပျံသန်း နိုင်ဘူးတဲ့ ” အဲဒီစာလေး ကို ဖတ်မိပြီး သူတို့ အလုပ်လုပ်တာကို ကြည့်နေရင်း ကနေ ရင်ထဲ ဆို့လာတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီနံရံ တွေကို တည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတယ် ။ ခရိုနီ တွေကို မုန်းတယ် ။
YE YINT HLAING နဲ့ uncle gyi တို့ကိုလည်း ကွန်မန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
မအိတုံကလည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ တင်ပြရေးသွားတာအတော်ကိုကောင်းသလို အဲဒီကိုယ်ချင်းစာ
တတ်တဲ့စိတ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့မျှဝေခံစားမိရပါတယ်၊ ကျွန်တော် ပိုစ့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကွန်မန့်မှာ ပြန်ညွှန်းပေးခဲ့ တာလည်း အဲဒီကိုယ်ချင်းစာသနားစိတ်အခြေခံပါဘဲ၊ အန်ကယ်ကြီးရေးသလိုဘဲ မိဘကခိုင်းစားလို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ပေးကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအရွယ်မှာ ပညာကိုအေးအေးလူလူကျောင်းတက် သင်နိုင်ပေမယ့် သူတို့လေးတွေဘ၀က ခါးသည်းလှပါလား ကလေးတွေကို သနားမိတာလေးပါဘဲ။
အဲဒီမှာ ကိုပေါက်က လက်တွေ့ဆန်ဆန်ရေးလာတာလည်း ကျွန်တော်ပြန်ငြင်းဆိုစရာမရှိသလို အန်ကယ်ကြီး ကထပ်ဆင့်ပြီး အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့ခက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်မခံနိုင် စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျ၊ ဒါဆို လက်တွေ့ခက်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာမှမလုပ်ဘဲ နေကြမှာလား ဒါလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်ပြန်ရော သနာမိခြင်း စာနာခြင်းက ပေးကမ်းထောက်ပံခြင်းကို လှုံဆော်တဲ့ အားဖြစ်စေသလို လက်တွေ့ဆန်မှု့တွေက မင်းလုပ်နိုင်ရင်မင်းလုပ် မင်းလုပ်သလောက်ရမယ် အလကား တော့ဘယ်အရာမှ မရဘူးဆိုပြီး အားအင်တွေ မခံချင်စိတ်တွေကို ဖြစ်စေပြန်ပါတယ်၊
အဲဒီတော့ ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်ရင် စာနာသနားသူတွေက ကူညီထောက်ပံဖို့ နည်းလမ်းရှာဆောင်ရွက်နေ ကြနိုင်သလို လက်တွေဆန်သူတွေကလည်း ကလေးတွေကို မာနအားတွေပေးဝေမျှနေကြမယ်လို့ဘဲ အတွေးပါးပါးရေးသားလိုက်ပါသည်။ ( မှားရင်လည်း မှားပေမပေါ့ ခင်ဗျာ )